“Oromiyaa badhaateefi Diinotasheef hinjilbeeffanne ijaaruun murteessaadha” -Obbo Shimallis Abdiisaa “Hojiilee guddummaa magaalittii gitu ni hojjenna” -Aadde Adaanach Abeebee – Ethipian Press Agency
“Oromiyaa badhaateefi Diinotasheef hinjilbeeffanne ijaaruun murteessaadha” -Obbo Shimallis Abdiisaa “Hojiilee guddummaa magaalittii gitu ni hojjenna” -Aadde Adaanach Abeebee
Gidduu kana naannooleefi bulchinsoonni magaalaa mootummootasaanii hundeeffataa turaniiru. Akka federaalaatti ammoo hundeeffamni mootummaa iftaan adeemsifama. Hundeeffama mootummaa isa federaalaaf bu’uura kan ta’aan naannooleefi bulchiinsoonni magaalootaa ergamaafi imaanaa itti kenname ba’aachuu yoo danda’an mootummaan biyyatti cimaa ta’a. Faallaasaatiin isaan maal na dhibdeedhaan narraa haa ba’uu hojjetu taanaan biyyis ta’u mootummaan jabaa hinjiraatu jechuudha.
Naannoolee mootummaa mataasaanii hundeeffatan keessaa kan naannoo Oromiyaa isa tokko. Akka Oromiyaattis Aadde Sa’aadaa Abduramaan afyaa’ii, Obbo Eliyaas Uummataa Afayaa’ii Ittaanaa Caffee Oromiyaa ta’uun filatamaniiru. Akkasumas Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezdaantii, Obbo Awwaluu Abdiimmoo Pirezdaantii Ittaanaa ta’aanii muudamuunsaanii ni yaadatama.
Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaafis Obbo Gazalii Abbaa Simaliin pirezdaantii, Obbo Guyyoo Waariyoommoo pirezdaantii ittaanaa gochuun caffichi muudeera. Bu’uuruma kanaan gurmaa’inni caasaalee mootummaa kan taasifame yoo ta’u hoggantoonnii, miseensoonniifi gaggeessitoonni koreelee dhaabbiin haaraas moggaafamaniiru.
Obbo Shimallisis muudamasaanii booda haasawaa taasisaniin, ummanni Oromoo saba guddaa Gaanfa Afrikaa ta’ee osoo jiruu, eenyummaan isaa sarbamee cunqursaa waggaa dhibbaa olii jala turuu kaasanii, ummanni kun qabsoo hadhaawaa taasiseen dukkana keessa ture keessaa bahuun qaanqee bilisummaa arguutti jiraachuu ibsu.
Ergama isaanitti kennames jaalleewwan isaanii waliin ta’uun amanamuumaafi kutannoo olaanaadhaan ummatasaanii akka tajaajilan waadaa seenanii, deemsa hanga ammaatti dhufameen qormaatawwan walxaxoo alaafi keessaan biyyattii mudatan deggarsa ummataan keessaa qaxxaamuruun har’a ga’uu himu.
“Hojiilee gurguddoo injifannoon ceene keessaa tokko Filannoo Biyyaalessaa Marsaa 6fa yommuu ta’u seenaa biyya keenyaa keessatti filannoo dimokraatawaafi haqni itti mo’ate, shirri diina keenyaa immoo kan itti fashalaa’e waan ta’eef, carraa kanaan ummata keenya rakkoo hedduu keessa dhaabbachuun injifataniif Caffee fuulduratti ulfina olaanaan galchaaf” jedhu.
Mootummaan haaraa ijaarame ergamoota gurguddoo hedduun fuula durasaa jiraachuu eeranii, kunis, shira diinota biyyattii fashaleessuun abjuu diinotaa dukkaneessuufi nageenya naannoo mirkaneessuu ta’u dubbatu.
Gama biraatiin, deemsa imala badhaadhinaa milkeessuun hojiiwwan ijoo hojjetaman ta’uu kan ibsan pirezdaantichi, kallattii misooma dinagdeefi hawaasummaa irrattis Sabboonummaa Oromummaa qabachuun ummata beekumsaafi dinagdeen ofdanda’e, ce’umsa teknoloojiin badhaadhe taasisuuf waggoota shanan dhufan xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjatamu ta’uu ibsu.
“Waggoottan ittaanan keessatti dinagdee magariisa, dinagdeefi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun hiyyummaa hir’isuufi qaala’iinsa jireenyaa irratti xiyyeeffannee ni hojjanna. Dhaloota ofitti amanu horachuuf walgahiinsaafi qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffannee ni hojjanna. Tarsiimoo dhibee dursanii ittisuufi kan dhibame yaalanii fayyisuu irrattis xiyyeeffatamee ni hojjetama. Magaalonni keenya hojmaata badaa irraa bilisa akka ta’aniif xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu yoo ta’u, sochii invastimantiifi magaalomsuu irrattis qonnaan bulaan, abbootiin qabeenyaafi dargaggoota keenya qabannee ciminaan kan hojjannu ta’a. Sirna haqaa keenya mirkaneessuu, kenniinsa tajaajilaafi rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf tumsa hawaasa keenyaa waliin xiyyeeffannaa addaan hojjanna” jechuun kallattii xiyyeeffannaa waggoota shaman dhufanii ibsaniiru.
Akka ibsa Obbo Shimallisitti, daangaa naannolee ollaa irratti piroojektota misoomaa hojjachuun hariiroo obbolummaa cimsuuf hojjatamaa akkuma ture ammas, Oromoof firaafi obbolummaa dabaluufi cimsuuf ummattoota obbolaa Oromiyaa daangessan waliin xiyyeeffannoo addaan kan hojjatamu yommuu ta’u, kunimmoo haasaa qofaan osoo hin taane gochaan kan agarsiifamu ta’a.
“Karoorri keenya waggoota itti aananii baay’ee hiixataa kan ta’eefi hojiitti hiikuuf tumsa ummata keenyaa nu barbaachisu ta’uun hubatamee bonaafi ganna osoo hinjedhiin gurmoofnee hojjachuun badhaadhina maatii milkeessuu qabna. Kanaafis Qeerroofi Qarreen Oromoo, dubartoonnifi haadholiin Oromoo, hayyoota, qaamolee nageenyaa, hojjettoota mootummaa naannichaa, diyaasporaa ala jirtaniifi dhalattoonni naannichaa hundi tumsa nuu taasisuu qabu” jedhu.
“Bara hojii darbe rakkooleen hedduu turanis waa sadi irratti hojjenne; Nageenya, Dimokraasiifi Misooma. Ummanni keenya qaamoolee shororkeesitoota naannoofi biyya keenya diiguuf wixxifatan barbadeessuuf tokkumman dhaabateera. Qaamota nageenyaatti makamuu cinaatti “Gaachana Sirnaa” wabii baraartii roorroo ta’etti ijaaruun jeeqxota qaaneesseera. Mootummaan Naannoo Oromiyaas aadaa ganamaatti akka deebi’u Mana Murtii Aadaa gurmeeseera” jechuun ibsu.
Qaamolee miira boo’ichaa keessa nu tursiisuu fedhan hinfeenu kan jedhan pirzdaantichi Itoophiyaan biyya lafeefi dhiigaan ijaaramte waan taateef kaayyoon mootummaa inni guddaan karoora imala badhaadhinaa irratti hundaa’uun Oromiyaafi Itoophiyaa ceesisuu ta’uu himu.
Jijiirama bu’uuraa saffisaa fiduuf waggoottan shanan dhufan akka waggaa 25tti kan fayyadaman ta’uus ni ibsu.
Haaluma walfakkaatuun Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee Kibxata darbe mootummaasaa haaraa kan hundeeffate yoo ta’u, Aadde Adaanach Abeebee Kantiibaam Obbo Zyaanxiraar Abbaay Kantiibaa ittaanaa ta’uun muudamaniiru. Akkasumas, Aadde Buzeenaa Abdulqaadir Afayaa’ii, Aadde Fooziya Mohaammad ammo Ittaantuu afayaa’ii taasisuun kan muude yoo ta’u, akkuma kan Oromiyaa gurmaa’ina caasaalee mootummaa sirreessuun hoggantoonni muudamaniiruf.
Kantiibaan magaalattis muudamasaanii booda haasawaa taasisaniin, Itoophiyaan biyya lammileenshee jaallatan taatus humnoota dhiibbaa keessaafi alaatiin irra qaqqabeen qabeenya qabduutti fayyadamuu dadhabdee hiyyuummaa keessa jiraachuuf dirqamuushee kaasanii, mootummaan haaraa amma hundaa’u garuu kana qabatamaadhaan jijjiiruuf kan onnate ta’uu ibsu.
Akka Bulchiinsa magaalaa Finfinneettis hojiilee guddummaa magaalittii gitan hojjechuun jireenyi lammilee qabatamaadhaan akka jijjiiramuuf xiyyeeffannaafi kutannoodhaan akka hojjetamu ibsanii, kanaafis fedhaafi hawwii ummatichaa ilaalcha keessa galchuun akka hojjetamu ibsu. Keessumaa ummata harka qalleeyyii hiyyummaa keessa jiraachuun qaala’ina jireenyaatiin dararamaa jiran rakkoo keessaa baasuuf xiyyeeffannaadhaan akka hojjetamu ibsu.
Qabeenya horachuuniifi sirnaan ittifayyadamuun lammileen sadarkaan jiran hundi akka fayyadamaniif kan hojjetamu ta’uu eeranii, kanaanis adeemsi badhaadhinaa mootummaan biyyattii hordofu kan nama dhuunfaarratti bu’uureeffate ta’uu agarsiisuuf dandeettii guddinaa magaalittii ilaalcha keessa galchuun tajaajila si’ataa ta’ee kennuuf kan hojjetamudha jedhu.
Keessumaa rakkoo ummata magaalittii jooo kanneen ta’aan rakkoo mana jireenyaa, bishaan, ibsaa, bilbilaafi bu’uuraalee misoomaa biroo guutuuf of kennuun kan hojjetamu ta’uu kantiibittiin ibsanii, dubartootaafi dargaggootaafis xiyyeeffannaa addaa kennuun fayyadamummaasaanii mirkaneessuuf akka hojjetamu dubbatu. Carraa hojii uumuufi misooma indastirii guddisuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuu, caasaawwan ummanni irraa fayyadamu uumuu, sirna fayyaa qulqullinaafi qaqqabummaa qabu diriirsuu, barnoota qulqullina qabu lammmilee biraan ga’uu, tajaajila lammuummaa maanguddoota bu’uura godhate diriirsuufi kanneen biroo irratti hojjechuun Finfinneen jiraattootashee mijattuu akka taatuuf kan hojjetamu ta’uu dubbatu.
“Hoggansi haaraan amma muudame ilaalcha “Finfinneen hunda keenyaaf ni geessi” jedhu qabachuun magaalattii yaadiddama haaraadhaan agarsiiftuu badhaadhina Afrikaa taasisuuf kan hojjetamu ta’a. hojii cimaa hojjetamuuf yaadame kunis hirmaannaa hawaasa bal’aatiin ala kan hinmilkoofne waan ta’eef jiraattoonni magaalitti hundi akkuma kanaan dura wajjummaasaa nutti agarsiise nu filate, ammas nu cinaa hiriiruu qaba” jechuun waamichasaanii dhiheessu.
Taatee biraan Caffeefi Mana mAree Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mula’temmoo bakka buutoota paartilee siyaasaa morkattootaaf ittigaafatamni kennamuusaati. Bu’uura kanaan Hayyuu Dureen ABO Jaal Araarsoo Biqilaa Hogganaa Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa Oromiyaa ta’uun kan muudaman yoo ta’u, Magaalaa Finfinneetti ammoo Raawwichiisaa Hojii Paartii Izeemaa Obboo Girmaa Sayifuu Hogganaa Biiroo Invastimantii, Obbo Yoosef Ibraahim Durataa’aa Ittaanaan Paartii ‘ABIN’ irraa Abbaataayitaa Bulchiinsa Qabeenya Ummataa ta’uun muudama argataniiru.
Walumaagala, mootummaan haaraa hundaa’u kun imaanaa guddaan kan itti kenname ta’uusaaf taateen filannoo biyyaaleessaa marsaa ja’affaa ragaadha. Ummannis yommuu sagaleesaa kenne, hanqinni waan dhibeef osoo hintaane egeree biyyaaf yaaduun waan ta’eef hoggantoonni amma ittigaafatama fudhatan isa yeroo kamiyyuu caalaatti of kennanii hojjechuu qabu.